Ahoana ny fomba hahitana ny tolotra SEO marina momba ny fifandraisana izay mahasambatra an'i Google?
Noho izany dia hojerentsika izany - azo atao ny manakarama orinasa iray, orinasan-tserasera, na olon-kafa manome tolotra consultation SEO ho an'ny tanjona tokana - te-hampifaly an'i Google aho. Eny, vao haingana aho no nanontany izany fanontaniana izany. Ary napetraka tamin'ny endrika tsy mahazatra izy io, tsy maintsy miaiky ihany aho - planos fotograficos de paisajes bonitos. Ary eny, matoky aho eto, tsy misy maneso. Ny fanontaniana manahiran-tsaina izay toa mahatsikaiky dia manome fahatsapana tonga lafatra, matetika tsy miraharaha ny anjaran'ny liona amin'ireo webmasters na tompona tranonkala izay tsy ampoizina ny mahita ny tenany fa mila filalaovana. Matetika izy ireo no mivoaka ho an'ny manam-pahaizana manokana manamora ny fisoratana mba hahazoana alalana haingana amin'ny laharam-pahamehana amin'ny lisitr'ireo valin'ny fikarohana. Farafaharatsiny dia mino an'izany izy ireo. Mamerina miverina amin'ny fanontaniana voalohany momba ny serivisy tolotra SEO izay andrasan'ny olona amin'ny fanatsarana sy fanatsarana ny tranonkala, mba hampifaliana an'i Google. Tsy misy dikany? Mananihany? Tsy misy izany! Ny fangatahana hafahafa dia azo antoka fa tsara, farafaharatsiny ho antsika ny hanao ny zava-drehetra momba ny fanatsarana ny fikarohana na dia mora azo kokoa aza.
Optimization paradox. Manao izany ho an'ny olona na ny milina?
Ny fiononana dia ny fanamafisana tsara ny tranonkalanao miaraka amin'ny fanohanana araka ny tokony ho izy avy amin'ny serivisy consultation SEO dia midika fa ny sarinao dia sarobidy sy mora ampiasaina. Etsy ankilany anefa, dia matetika no tsy raharahian'ny olona maro izany. Ankoatra izany, indraindray izy ireo dia mamela ny fifantohana fotsiny amin'ny sehatra teknolojika SEO fotsiny, ka noho izany ny fananana pejy ho an'ny famakiana masinina amin'ny fahafinaretana. Na izany aza, tsy azoko antoka izany. Noho izany, amin'ny fijerena ny serivisy consultation SEO, misy fifandanjana ara-dalàna eo amin'ny traikefa ananan'ny mpampiasa, ary "mampifaly an'i Google. "Ahoana anefa no ahafahantsika mahita ny zavatra roa amin'ny fotoana iray? Andeha hiezaka haka sary an-tsaina ny dingana iray amin'ny fisafidianana ny mpilatsaka an-tsokosoko tsara ho an'ny tranokala. Ho an'ny traikefa mpampiasa tsara, ny zavatra rehetra momba azy dia farafaharatsiny. Nefa inona no fanontaniana tokony hangatahantsika hanakarama ireo olona tsara izay afaka mahavita fifaliana amin'ny milina fikarohana amin'ny fotoana iray? Andao ezaho jerena hoe ahoana no mety hitranga.
Mametraha tanjona tsara eo anoloan'ny SEO
Eritrereto hoe miara-mipetraka amin'ny ekipa rehetra anao ianao, ary koa ny tale lefitra na ny ekipa filankevianao, na iza ianao hiara-miasa. Right? Dia andeha isika hiezaka ny hamolavola ny tanjona voalohan'ny tolotra amin'ny SEO consulting. Alohan'ny hanombohanao dia maninona ianao izao no te-hanana ny Search Engine Optimization amin'ny tetikasa misy anao? Nahoana ianao no te hifanaraka amin'ny zavamananaina fotsiny dia ny SERP ho an'ny teny manan-danja indrindra nefa tsy dia marefo loatra. Amin'ny fomba ahoana no hanaovanao ny fahasamihafana eo amin'ny fahombiazana marina na ny tsy fahombiazanao? Miasa amin'izany fomba izany aho, ary tsy mieritreritra toy ny greenie, manolotra soso-kevitra tsotra izao aho - andramo ny handinihina tanjona tsara hampidirina am-pahamendrehana ny serivisy consultation SEO, manohitra ny tanjona tranainy matetika dilettantes misavika amin'ny fotoana rehetra.
Te-hahazo fitaterana bebe kokoa amin'ireo olona ireo aho, izay liana amin'ny lohahevitra. Azoko antoka fa mitady izany izy ireo. Ary mila ny tranokalako aho mba halefa amin'ny olon-drehetra manontany tena. Izany no antony ilànao fifamoivoizana lehibe kokoa ahafahana mivezivezy eo anoloan'ny mpanatrika indray mandeha ary ho an'ny rehetra;
Manao izay tsara indrindra vitako aho hanatsarana ny fidiram-bolan'ny orinasa. Miezaka ny hahomby amin'ny varotra vaovao ny ekipanay. Mino izahay fa ny sampan-draharaha momba ny SEO dia tanjaka goavana lehibe hanosika ny varotra;
Mitady mpihaino marim-pototra izahay. Ankehitriny, ny ekipanay dia miasa bebe kokoa amin'ny fizarana bebe kokoa amin'ny fisedrana maimaim-poana, fisoratana anarana ary famandrihana maimaim-poana;
Mila manangana fikambanana marika matanjaka izahay ho an'ny orinasanay. Ary manana fanaraha-maso tsara be dia be izahay, nefa mbola miorina eo ambany sivana marary na mahantra. Tiantsika ny hanosika ny fihetseham-po mety, ary mety hialana amin'ireo ratsy indrindra. Araka ny fantatsika dia maro ny olona liana amin'ny anaranay na marika marika.
Mitady ny fifamoivoizana aho, ny fifamoivoizana, ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Mila izany rehetra izany aho, satria ny olon-drehetra dia maniry izany, ary Google dia tia azy io koa. Izany dia fahadisoana mahatsiravina, tanjona tsy misy dikany sy tsy misy. Na izany na tsy izany, tsara kokoa ny milaza fa manana statistika fikarohana ianao. Raha toa ianao manantena fa hisy fiovam-po tsara hitondra ny fidiram-bolan'ny orinasa, na zavatra toy izany - tsara ho anao. Tsara izany, izany no hataony;
Mieritreritra ny fisian'ny fikarohana mitady ho azy. Tsy tokony hametraka izany amin'ny lisitr'ireo tanjona ianao, tsy dia lavitra loatra amin'ny fananana "tanjona" tsara eo an-tampony. Matetika, marika ratsy ho an'ny serivisy momba ny SEO izany. Amin'ny ankapobeny, ny mpikarakara toy izany dia tsy maintsy ho toy ny andiam-barotra monkey raharaham-barotra. Midika izany fa tena azo inoana fa hahita vahaolana haingana ianao, nefa mbola fohy ihany amin'ny alàlan'ny teknika sasantsasany, manipulative, na mandràra ny fandeferana, ny Black Hat SEO dia matetika miaraka amin'ireo tolotra tsy rariny;
Toa tafiditra ao anatin'ny fifaninanana ara-barotra mafy ny orinasanao. Ary misy mpanohitra iray manokana ho an'ny fehezan-teny manokana iray izay tianao hialana amin'ny lafy marina. Tokony hanonona ny lalan-diso indray ianao raha manambara azy ho tanjona tena izy. Tokony hadinonao ny zava-poana toy izany. Manontania tena ihany - afaka mampita anao mivantana any amin'ny vokatra azo avy amin'ny fidiram-bola, na farafaharatsiny ho an'ny tanjona ara-pitantanana? Raha misalasala ianao, na dia mandritra ny fotoana fohy aza, tsy tanjona tsara izany;
Iza no iza. Fotoana hanamarinana
Eny, handalo ny fizarana faharoa amin'ny "sehatra fictional" isika, araka ny teny amam-pihinanan-teny sy fihainoana voamarik'ireo mpihazakazaka sarotra sasantsasany dia tsy misy ifandraisany amin'ny serivisy momba ny SEO. Andeha isika hanomboka hifindra any amin'ny famaranan-tenantsika ary hanao safidy iray - na mifampiraharaha amin'ireny olona ireny na mandao ny efitrano fivoriambe amin'ny fotoana fohy. Raha ny marina, mino aho fa modely fohy etsy ambany no afaka miasa mora amin'izany.
Anontanio avy hatrany ny mpitsoa-ponenanao, midika izany fa afaka mahafantatra mora kokoa momba ny fahatakaran'ny orinasa sy ny fomba fitadiavana ny SEO. Ireo mpanadina dia tsy hahazo ny vintana, ary koa ireo sampan-draharaham-pahadiovam-pitondrantena, na ireo mpandraharaha tsy miankina amin'ny sampan-draharaha misahana ny SEO. Mahereza ary ataovy mangovitra izy ireo amin'ny fangatahana ny tena fototra, zavatra toy ny hoe "Hey, te-hahalala fotsiny aho hoe ahoana no ahitanao ny valin'ny fikarohana, ary inona no azonao atao mba hamahana azy ireo?". Tokony mbola milamina tsara ny resadresaka, tsy misy fiantraikany kely akory ny fahadisoam-panantenana, tsara izany. Izay rehetra tokony ho renao dia ny valiny marina ihany, toy ny hoe "Eny, izany fotsiny amin'ny Google, izao no fomba anaovany ny zavatra. Ary izao ny mahafantatr'ireo manam-pahaizana ny tady, ary izao no fomba ampiasain'ny ekipanay hanaovana io asa io, ary ity no azontsika antenaina amin'ny ho avy ". Moa ve ianao mahatsapa ny fomba mifanaraka amin'ny resaka tokana marina? Avy eo ianao dia afaka mandinika ny kandidany amin'ny fanaovana ny fikarohana rehetra ataonao, na dia tsy misy eritreritra faharoa aza.